‘आवरण’ हेरे पछी सिनेकर्मीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया | Medianp.com
बल्खु दरबारमा रोदीघरमा जस्तै
जुहारी चल्यो, अन्तत : शुक्रबरको केन्द्रिय कमिटी बैठक पनि
माछो माछो भ्यागुतो नै भयो
काठमाडौँ, नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय वल्खु दरबारमा शुक्रबार मध्यान्ह बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले लिखित रुपमा असन्तुष्टी तथा ध्यानआर्कषण प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त पत्रमा बरिष्ठ नेता माकुनेले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गरेर अब पार्टी नचल्ने भन्दै अध्यक्ष ओली पक्षलाई चेतावनी……
Home फिचर ‘आवरण’ हेरे पछी सिनेकर्मीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया ‘आवरण’ हेरे पछी सिनेकर्मीले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
मिडिया एनपी काठमाण्डौ , आज बाट प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘आवरण’ले सुरुवाती ब्यापार राम्रो गरेको फिल्म युनिटले जनाएको छ । दर्शक माझ प्रतिक्षित फिल्मको सुचिमा पर्न सफल ‘आवरण’ ले प्रदर्शनको पुर्व सन्ध्यामा ‘बिशेष शो’ समेत आयोजना गरेको थियो । फिल्म हेरी सके पश्चात ‘बिशेष शो’ हेर्न आइपुगेका सञ्चारकर्मी तथा फिल्मकर्मीले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अधिकांस ले फिल्मको ग्राफिक्सको तारिफ गरेका छन् । कमै मात्रामा नेपाली फिल्म भित्र देखाइने सस्पेन्स , थ्रिल र हरर यसमा देखाइएको छ । यसलाई सुबास कोइरालाले निर्देशन गरेका हुन् भने यसमा अनिल योन्जन , प्रतिभा योन्जन , लक्ष्मी लामा , सबिता राइ र रोजन श्रेष्ठको लगानी रहेको छ । यसमा प्रियंका कार्की मुख्य भूमिका देखिएकी छिन ।
रहस्यमय फिल्मको कथा प्रियंका वरिपरी नै घुम्छ । यसमा प्रियंका संगै दिव्य देव , सुशील राज पाण्डे , सिमोन जंग मल्ल , नरेश पौडेल , रश्मि भट्ट , सुनिता ठाकुर , राजन इशान र बालकलाकार अनुभव रेग्मी तथा आचल अग्रज केसीको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्म हेरी सके पछी सञ्चारकर्मी तथा फिल्मकर्मीले सामाजिक संजालमा गरेको पोस्ट तथा बिभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिएको केहि प्रतिक्रिया यस्तो छ ।
सुरज सिंह ठकुरी (अभिनेता तथा टेलिभिजनकर्मी ) – सोचेको भन्दा धेरै नै पाए ‘आवरण’ मेरो लागि सरप्राइज नै भयो । बनि रहेको फिल्म भन्दा यो केहि फरक छ । जुन दर्शकले नयाँ खालको फिल्म हेर्न चाहनु हुन्छ उहाहरुको लागो यो बिशेष छ । दायाहाङ राई (अभिनेता) – मैले इनजोय गरे सबैको काम राम्रो छ । स्टोरी टेलिंङग तथा कन्टेन को हिसाबले नयाँ एक्सपेरिमेन्ट हो भने दर्शकको लागि नया स्वाद । पहिलो सिनेमा ‘अपवाद’ मा झैँ यसमा पनि निर्देशक सुबासजी ले नया एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको छ । प्रियंका लगायत सम्पूर्ण को अभिनयले चरित्र माथि न्याय गरेको छ । निशा अधिकारी (नायिका) – यो क्वालिटीको सस्पेन्स , हरर तथा थ्रिलर नेपाली मुभी हेरेको फर्स्ट टाईम नै हो । मलाइ एक दम राम्रो लाग्यो । धेरै ठाउमा म पनि डराए । हामि टेक्निकल्ली धेरै रिच भैसकेका रहे छौ । बिशेष गरि यसको ग्राफिक्सको पार्टलाई तारिफ गर्नै पर्छ । साथमा प्रियंका सहित अरुको अभिनय निकै राम्रो लग्यो । मिलन चाम्स (निर्देशक) – यो नेपाली फिल्ममा नयाँ प्रयोग हो । ‘आवरण’ हेरे पछी लग्यो टेक्निकल्ली रुपमा पनि हामि स्ट्रोंग हुन् सक्छौ भनेर । प्रियंका जी र नयाँ कलाकारहरु दिव्य देव , सिमोन जंग लगायतको अभिनय राम्रो छ । गित संगीत पनि राम्रो लग्यो । रबिन श्रेष्ठ (गायक/निर्माता) – फिल्म राम्रो छ । फर्स्ट टाईम नेपाली हरर थ्रीलर मुभी हेरियो । मेकिङ वाइज पनि निकै मेहनत गरिएको छ । हरर , सस्पेन्स र थ्रिल मन पराउने दर्शकलाई एक पटक फिल्म हेर्न आग्रह गर्दछु ।
सदिक्षा श्रेष्ठ (पुर्व मिस नेपाल) – मैले फर्स्ट नेपाली थ्रिलर मुभी हेरेको हो । मलाई निकै राम्रो लग्यो । फिल्मका कलाकारले आफ्नो पात्रलाई न्याय गर्नु भएको छ । मा धेरै ठाउमा झस्किए र केहि ठाउमा डराए पनि । समग्रमा मलाइ फिल्म राम्रो लग्यो ।
रेनशा राई (कोरियोग्राफर) – फिल्म हेर्दा ठिकै लाग्यो । प्रियंकाको अभिनय राम्रो छ । केहि ठाउमा कमि कमजोरी छ तर यो थ्रिलर मुभी भएकोले यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
संयम पुरी (नायक) – फिल्म हेर्दा निकै डराए । टेक्निकल्ली केहि कुरामा गुनासो छैन निकै बलियो छ ‘आवरण’ । मुख्यतया सिनेम्याटोग्राफी , ब्याकराउण्ड स्कोर र डिरेक्सनको पार्ट निकै बलियो । फिल्म हेरी सके पछी ग्राफिक्स को तारिफ न गरि रहन सकिन्न । फिल्म राम्रो बनेको छ ।
फोटो कथामा डराउने ‘आवरण’ को ‘बिशेष शो’
संसारको सबैभन्दा ठुलो हिराको लिलामी !
‘टुल्के’ काठमाडौंमा भुल्केपछि
पोखरामा खुला तेक्वान्दो प्रतियोगितामा सुरु
सामसुङको ग्यालेक्सी A5 र A3 मेटल बडी स्मार्टफोन सार्वजनिक
One Comment	Pingback: आफ्नो र सुवासको सम्बन्धको बारेमा यस्तो भन्छिन प्रियंका | Medianp.com LeaveaReply Cancel Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	ताजा खबर ‘टुल्के’ काठमाडौंमा भुल्केपछि
अमेरिकामा आतंकवादी हमलाको खतरा
अमेरिकी हवाई आक्रमणमा २२ जना आईएस लडाकूको ज्यान गयो
धेरै दूध पिउनु पनि हानिकारक !
सुनको मूल्य तोलामा ७०० घट्यो
Facebook चलचित्र ‘टुल्के’ काठमाडौंमा भुल्केपछि
एउटा साथीको प्रर्दशन मिती फेरी सर्यो
काठमाडौँ र अमेरीकामा एकैसाथ लाग्ने भो श्री ५ अम्बरे
धेरै साथी बनाउने ध्याउन्नमा चलचित्र ‘एउटा साथी’ , बिहिबार अर्को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘एउटा साथी’ राम्रो लागे अरुलाई भन्नुु्स्, नराम्रो लागे मलाई -निर्देशक सुवेदी
म्युजिक अपडेट ३ महादेशबाट बनेको भिडीयो ‘के हो र जिन्दगी’ (भिडीयो )
प्रेमीकाबाट धोका पाए गायक प्रमोद खरेलले (भिडियो)
रञ्जनको मायामा चुर्लुम्म प्रजिता(भिडियो)
घरबार बसाउने सुरमा शहीमा (भिडियो)
नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र यहाँ हेर्नुहोसBARBAD Nepali MovieWife trafficked for moneyNai nabhannu la2nepali movieRajneeti Nepali MovieShreeman Shreemati Nepali MovieEKU the jungle man Nepali movie
© 2014, MediaNP- News and Entertainment, All Rights Reserved